C/raxmaan Faroole oo si aan caadi ahayn u ceebeeyay madaxda maamul goboleedyada dalka (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/raxmaan Faroole oo si aan caadi ahayn u ceebeeyay madaxda maamul goboleedyada dalka (DHAGEYSO)
Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland ahna xildhibaan ka tirsan Aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya C/raxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud (Faroole) oo maalintii shalay dib ugu laabtay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa si kulul uga hadlay fara-gelinta ay madaxda maamul goboleedyada dalka ku haayaan madaxweyne Farmaajo.
C/raxmaan Faroole oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada dalka inay culeyska iyo fara-gelinta ka daayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Sidoo kale, xildhibaan Faroole ayaa sheegay in madaxda maamul goboleedyada dalka ay ku qasbayaan madaxweyne Farmaajo inuu magacaabo shaqsiyaad ay iyaga si gaar ahaaneed u wataan.
Dhinaca kale, C/raxmaan Faroole ayaa sheegay in sababta ugu weyn ee uu magalaada Muqdisho uga soo tagay ay tahay inuusan culeys ku noqon madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo, oo cid waliba ay xilal ka dooneyso, fursadna la siiyo si uu usoo xusho ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ee uu u arko inay isla shaqeyn karaan.
Ugu dambeyntii, xildhibaan C/raxmaan Faroole ayaa ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada dalka inay wax-qabad muuqdo la yimaadaan islamarkaana ay wax u qabtaan dadka ay abaartu heyso balse ay faraha kala baxaan arrinta ay quseeyso madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
“Waxaan soo jeedinayaa, intii hore idinku filan ceyb, nimankiina madasha ee gobolada ka yimid, iyo wixii la socday, ammaan ha idinka helo ninkaan la doortay, oo shacbiyadda ku helay, ra’iisul wasaarihiisa iyo golihiisa wasiiro ha dhisto, aniga shaqsiyan waxaa uga soo tagay Muqdisho inaan madaxweynaha culeys ku saarin in shaqsi gaar ah uu xil ugu magacaabo” Sidaas waxaa yiri Xildhibaan Faroole.